भुल्छौ भन्ने के थाहा? | आरोह अवरोह.....
भुल्छौ भन्ने के थाहा?
Posted on Sunday, December 19, 2010 No Comments
चटक्कै माया मेरो, भुल्छौ भन्ने के थाहा?
काँडासरी गुलावमा, फूल्छौ भन्ने के थाहा?
खुव भन्ने गथ्र्यौ म नै राजकुमार तर
अर्कैसंग हातसमाई , डुल्छौ भन्ने के थाहा?
म वाहेक अन्त आँखा लगाउँदिन भन्नेले
जो भेट्यौ त्यै संग, घुल्छौ भन्ने के थाहा?
तिम्लाई मात्र दिएको चोखो मेरो मायालाई
तराजुमा पैसा संग तुल्छौ भन्ने के थाहा?
दुख गरीगरी पाको चोखो तिम्रो माया मैले
क्षणभरमै घातगरि, असुल्छौ भन्ने के थाहा?